Art is My Life: ၀ိုင်းဝန်းပါဝင် ဆွေးနွေးကြပါ
ကျွန်တော်တို့ ဘလော်ကာတွေရဲ့ အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်လေးကို စိုက်ထူမဲ့နေရာမှာ စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပူးပေါင်းပါ ၀င်မယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် ကျွန်တော့အနေနဲ့ လွန်စွာမှ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး email ပို့မေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ မေးခွန်းအချို့ကို ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်။
ဘလော့တွေမှာ ရေးနေကြတာပဲ ကောင်းနိုးရာရာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ ဆိုတော့၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်စာအုပ် တစ်အုပ်အနေနဲ့ ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် စာပေစိစစ်ရေးကို ဖြတ်သန်းရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဆင်ဆာနဲ့ မညှိစွန်းနိုင်တဲ့ ပို့ဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ ဘလော်ကာတွေရဲ့ စာအုပ်ကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်မဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ ဘာတွေသိချင်ကြမလဲ။ သူတို့ဖတ်ချင်နေတာဘာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ပေးလိုက်တဲ့ Message က သူတို့အတွက် ဘယ်လောက် အသုံးဝင်မလဲ။ ဆိုတာကို အခြေခံထားပြီး ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ အကြိုက်၊ ဘလော့စာအုပ်ထုတ်ဝေရာမှာ ပူပေါင်းကြမဲ့ Blogger အများစုရဲ့ အကြိုက်၊ လက်ရှိစာပေ ဈေးကွက်ရဲ့ အကြိုက် တွေကိုညှိနိုင်းသွားရမှာပါ။
လောလောဆယ် အကြမ်းဖျင်းစဉ်းစားထားတာက စာအုပ်မှာ ကဗျာ၊ ပညာရေး၊ အတွေ့ကြုံ၊ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုတို၊ အတွေးအမြင်၊ ဘလော်ကာတွေထဲမှာ ကာတွန်း ဆွဲနိုင်တဲ့လူရှိရင် ခေတ်ကို သရော်နိုင်တဲ့ တစ်ကွက်ကာတွန်းမျိုး လည်းပါရင် ကောင်းပါတယ်။
ပညာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ လက်ရှိဘလော့ရေးနေသူတွေရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ ကွန်ပြူတာ ပညာမှာ ထူးချွန်ကြသူများ ဖြစ်တာကြောင့် ကွန်ပြူတာ ပညာရဲ့ အခဏ်း ကဏ္ဌ။
ဘလော့ကာတွေထဲမှာ ပြည်ပရပ်ခြားမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ သူတွေ ပါတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်ပမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ ရည်ရွယ်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကိုယ့်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ယှဉ်တဲ့ အတွေ့ကြုံတွေ အကြံပြုချက်တွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ၊ ဘယ်လိုကျောင်းတွေကို ဘယ်လို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တယ် ဆိုတာတွေ။ လက်ရှိကျောင်းတက်နေရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ။ အခက်ခဲတွေ ပါဝင်ပါမယ်။
ပြည်ပရပ်ခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ စိတ်ကူယဉ်နေတဲ့ မြန်မာက စာဖတ်သူတွေအတွက် အခုပြည်မှာ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ ဘလော်ကာတွေရဲ့ အကြံပြုလမ်းညွှန်ချက်တွေ အတွေ့အကြုံတွေ။
ကျန်တာကတော့ ကျွန်တော့တို့ စာအုပ်ကို ၀ယ်ဖတ်လိုက်တဲ့လူတွေကို အကျိုးရှိသွားမဲ့ အကြောင်းရာတွေကို ရေးနေကျပို့ထဲကနေ ထုတ်နုတ်တင်ဆက်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နောက် ထပ်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ပူပေါင်းပါဝင်ကြမဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို ပူပေါင်းပြီး ညှိနိုင်းဆောရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက အဝေးရောက်မြန်မာတွေ အတွက် ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကတော့ ဝေးမှာနေတဲ့သူငယ်ချင်း ဘလော့ကာတွေ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့ ပြည်တွင်းက မိဘတွေ ဆွေမျိုးတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီကနေတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက် ကြည့်ရင် ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း အဝေးရောက် သူငယ်ချင်းတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင် မယ်လို့ ထင်ကြပါသလဲ။ ဝေးရောက်သူ ငယ်ချင်းများရဲ့ အမြင်နဲ့ ဆန္ဒ ကို ဆွေးနွေးပေးဖို့ မေတ္တာရပ် ခံချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု စဉ်းစားမိတာက စာအုပ်အနေနဲ့ ထုတ်ရင်ကောင်းမလား။ အကြောင်းအရာ ( အခန်း ကဏ္ဌတွေ ) များနေတဲ့ အတွက် မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ် ( eg Myanmar Blogger Day မဂ္ဂဇင်း) အနေနဲ့ ထုတ်ရင်ကောင်းမလား။ သူငယ်ချင်းတွေ ဆွေးနွေးပါဦး။
နောက်ဆုံးရည် ရွယ်ချက်တစ်ခုက မြန်မာပြည်မှာ လူငယ်တွေ အင်တာနက်ကို တွင်ကျယ်စွာသုံးနေကြပေမယ့် ကိုးဆယ်ကိုး ရာခိုင်နှုန်းက Chat ၀င်တာ။ ဒီလိုစာအုပ် ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ချက်ဝင်နေတဲ့ လူငယ်တွေကို အင်တာနက်ကို ချက်ဝင်တာထက် ကောင်းအောင် ဘယ်လိုအသုံးချလို့ ရတယ်ဆိုတာကို ဒီစာအုပ်ကနေ အနည်းနဲ့ အများပန်းပိုးပေး ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီလိုစာအုပ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ဘလော့ဆိုတာ ဘာလဲဆိုကို မသိကြသေးတဲ့ လူတွေကို ဘလော့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခွင့်ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်က Journalist တွေ လက်ထဲကို ဘလော့ရေးတဲ့ အလေ့အထ ရောက်သွားစေချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ ခဗျာမှာ သတင်းတွေကို ထုတ်ပြန်တဲ့အခါ စာပေစိစစ်က ဖြတ်လိုက် ဌာနဆိုင်ရာက ဖြတ်လိုက်နဲ့ သူများတကာတွေ ဖြတ်ပြီးသား အင်္ဂါမစုံတော့တဲ့ သတင်းလေးတွေကို ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးရပါတယ်။ သူတို့ကိုသာ ဘလော့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အားသာချက်ကို တပ်ဆင်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမွန်တဲ့ သတင်းအချက်လက်တွေ ပြည်သူတွေကို ချက်ခြင်းအသိ ပေးနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်ခုက ဒီလို စာအုပ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိမြန်မာဘလော်ကာတွေရဲ့ စာရေးအားနဲ့ စာပေအဆင့်တန်း ဟာလည်း ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာ blogger တွေကိုလဲ အကြောင်းကြားပေး ကြပါဦး
Suchagreat idea! and thanks for letting me participate in this. Please give me your email address or email me at tapyaythu@gmail.com.
ကျနော်တွေးမိတဲ့ အခက်အခဲလေးတွေပါ။ ကျနော့်အမြင်သက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။
(အများအကျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့) အဲဒီအခက်အခဲတွေကို (စိတ်ပါ လက်ပါနဲ့) ၀ိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းပေးလိုပါတယ်ဗျာ။